Kedu ihe kachasị elu chọpụtara na Amazon na otu ị ga - esi rite uru na ha?
Ị na-echeworị ihe ngwaahịa bụ n'elu chọpụtara Amazon? Ozi a ezighi ezo n'aka onye obula. Otú ọ dị, ọ bụghị ndị ọrụ niile, tinyere ndị ahịa n'ahịa, maara otú e si enweta ya. Otú ọ dị, ndị na-achọ ngwaahịa na ere ahịa na saịtị ma ọ bụ site na Amazon nwere ike inwe mmasị na ozi a.
N'isiokwu a, anyị ga-atụle ụfọdụ TOP ịchọ ihe na Amazon nke nwere ike inyere gị aka inweta ego. Ma ọ bụrụ na ị ga-abanye n'ime mbubata azụmahịa ma ọ bụ azụmahịa azụmahịa, ị nwere ike ịmepụta ngwaahịa ndị a ma ọ̄ bụ ngwaahịa ndị dị na ntanetị akwa, dị ka f.i - rtg no deposit bonus codes. Alibaba ma ọ bụ Aliexpress. Ọzọkwa, anyị ga-atụle ụzọ otu esi emepụta mgbasa ozi iji gbasaa ngwaahịa ọkụ ndị a nke ọma.
Ya mere, ka anyị tụlee ụfọdụ ngwaahịa ncha ọkụ dị na Amazon nke anyị nwere ike iji zụlite ego.
TOP achọrọ ihe na Amazon
Tupu anyị aga n'ihu na mkparịta ụka nke TOP achọpụtara na Amazon, m ga-achọ ịmeghe gị obere ma dị ịrịba ama e-azụmahịa nzuzo. Iji nwee ihe ịga nke ọma, ịkwesiri ịkwado onye ahịa gị, ọ bụghị maka ego gị. Ịkwesiri ịchọta nsogbu onye ọrụ ma nye ya ngwọta kacha mma n'ụdị ngwaahịa ị na-ere ahịa. Iji guzosie ike ire ere, ị ghaghị ịchọta ihe mere ndị ahịa gị nwere ike iji ego nye ihe ị kwadoro. E nwere ihe kpatara azịza ọ bụla. Ọ bụrụ na ị maara nke a, ị nwere ike ijikwa usoro ahia ma mee ego na mgbe niile. Ihe kacha mma banyere ya bụ na ịkwesịrị ịkwalite ngwaahịa gị dịka ndị ọrụ ga-enwe mmasị na gị. A kpọtụrụ ihe ndị a niile, m ga-achọ ikwu na ọ dị mkpa ka ị lekwasịkwuo anya n'ịchọta otu ìgwè nke ndị na-achọ ụzọ isi dozie ihe ndị bụ isi ha. Ọ bụrụ na ị na-enwe obi ụtọ ịchọta ndị a, ị nwere ike rere ha ngwaahịa dị iche iche metụtara nsogbu ha kama ịbụ naanị otu.
Ya mere, ugbu a mgbe ị nwere echiche nke ebe ị ga-amalite ọrụ azụmahịa gị, anyị nwere ike ịga n'ihu na ihe ndị TOP achọpụtara na Amazon.
N'ụbọchị anyị, ndị nlekota kọmputa nwere ọkwa kacha elu
Ndị ụlọ ahịa na ụlọ ọrụ dijitalụ zụrụ ha n'ụzọ zuru oke dịka ha nwere ike inye aka maka ọnụọgụgụ / nọmba ahụ. Ebumnuche nke a, ndị ọrụ gị nwere ike ịnwe mmasị na ndị mmepụta ihe nkiri, ndị na-egwu egwuregwu na ndị nkịtị PC na-achọ ihe ngosi dị nro ihuenyo.
Kọmputa na -
N'etiti ndị nlekota kọmputa nke kachasị zụrụ azụ, anyị nwere ike ịmata ọdịiche dị iche iche - HP, LG, ASUS, Samsung, na ndị ọzọ na - na Pixie.
oche ndị a na-emekarị n'oge anyị n'ihi ịrị elu nke ụlọ ọrụ n'ịgba chaa chaa n'ịntanetị. Ụlọ oche niile na-egwu egwu dị oke ọnụ n'ihi na ha bụ ndị TOP na-achọ ihe na Amazon. Ụdị oche ndị a na-etinye na niche nke nwere nnukwu ego dịka ngwá ọrụ egwu, ihe ndị ọzọ, na ihe ndị ọzọ.
Anyị nwere ike ịhụ ọnụọgụ ahịa dị oke ahịa n'ahịa a. Ụgwọ otu oche ịgba chaa chaa nwere ike ịmalite na $ 500 wee bulie $ 20,000.
Ndị na-ege ntị nwere ike ịmasị na ngwaahịa ndị a na-agụnye ndị na-egwu egwuregwu, ndị na-egwu egwuregwu, ndị na-egwu egwuregwu, ndị na-egwu egwuregwu na PC na egwuregwu egwuregwu vidio.
N'etiti ndị kachasị mma na cha cha cha ahịa ahịa, anyị nwere ike ịmata ihe ndị a - Openwheeler, Playseat, Commander, na E-WIN.
Otu ọzọ ọkacha mmasị nke ngwaahịa ndị nwere ike ị nweta uru dị ukwuu bụ ngwaọrụ GPS . Fọrọ nke nta ka ndị ọkwọ ụgbọala niile jiri ngwaọrụ ndị a na-agagharị na ebe ha chọrọ. Ngwaọrụ GPS na-enye ndị ọrụ ihuenyo na okporo ụzọ ka mma karịa smartphones. Ịkwesighi ịdabere na map na okporo ụzọ ụzọ mgbe ị nwere ngwaọrụ GPS. Ya mere, ọ nwere ike iji dị ka ihe akaebe n'ọdịnihu..Ọzọkwa, ngwaọrụ ndị a nwere ike ibugharị ma enwere ike iji ya rụọ ọrụ ọ bụla. Ighaghachi ụdị ngwaahịa a, ị ga-enyere ndị ọrụ aka idozi nsogbu ha ugbu a. Ọ pụtara na ị ga-enye aka ma ngwaahịa gị ga-abụ nnukwu ọchịchọ.
Ndị nwere ike ịzụta ngwaọrụ GPS bụ ndị ọkwọ ụgbọala, ndị njem, ndị ọkwọ ụgbọ mmiri, ndị ọkwọ ụgbọala nkịtị, ndị ọkwọ ụgbọala oge mbụ, ndị uweojii na ndị ahịa niile dị mkpa ka ha nwee ike ịga ahịa na nzukọ.
Ngwaahịa GPS ndị kachasị mma gụnyere Garmin, Samsung, na Rand.
Olee otú iji nweta ihe ịga nke ọma na Amazon na-ere ndị a TOP achọ ihe?
Nke mbụ, ịkwesịrị ịmepụta saịtị nyochaa gburugburu ngwaahịa ịchọrọ ịchọta ma gbalịa ịkwado saịtị a na weebụ. Ịkwesịrị ịkwalite saịtị a na kọntaktị ndị a maara nke ọma dị ka Google ma ọ bụ Bing site nyocha ọchụchọ gị. Ịkwesịrị ịmepụta ndepụta nke ihe ndị dị mkpa n'ahịa gị niche ecommerce Keywords. Ya mere, ị ga-achọ ezigbo nyochaa njikarịchọ search engine ma ọ bụ itinye ego na njikọ njikọ site na netwọk blog nzuzo ma ọ bụ mmemme mmemme. Ị nwere ike irite uru site na iji saịtị nyochaa ndị a ma ama: Consumer Search, Consumer Reports, CNet, na Engaged.
Na nke abụọ, ị nwere ike ịmepụta ihe ntanetịime ọnụahịa. N'ebe a, ị nwere ike iji ọnụahịa dị iche iche na-egosi ọnụ ahịa nke ụlọ ahịa dị iche iche. Mpaghara njiritabara adighi na adabere na nyocha omimi nke uchu ma nwee ike zoputa uzo site na ihe di iche iche netiti weebụ. Nye ndị ọbịa gị na saịtị ndị nwere atụmatụ dị iche iche, atụmatụ ọnụahịa, ụdị ntanye na ntanye nhọrọ, ha ga-aghọkwa ndị ọbịa gị mgbe niile, na-eweta okporo ụzọ ndị a gbanwere.
N'ikpeazụ, ị nwere ike ịmepụta mkpokọta ntanetị ma kwuo maka ngwaahịa gị dị iche iche. Ọ bụ usoro mgbasa ozi bara uru nke na-egosi na ị nwere nkà na nke a ma na-emepụta ihe oyiyi dị mma. Ịkwesịrị inye ndị na-agụ akwụkwọ gị ikikere na ọdịnaya dị mkpa na ihe ndị na-akpali mmasị ma chọpụta data.
N'isiokwu a, anyị na-achịkọta ihe ndị TOP chọọ na Amazon na anyị nwere olileanya na ọ ga-enye gị ụfọdụ echiche maka ngwaahịa iji kwalite iji nweta ego site na ịzụ ahịa Amazon. Ihe ndị m kpọtụrụ aha n'isiokwu a, nwere ọnụahịa dị elu ma na-ere nke ọma n'etiti ndị na-enyocha Amazon, n'ihi ya ị nwere ohere ọ bụla ị ga-eme nke azụmahịa gị.